Boeing 747 miaraka amina mpizahatany 500 any amin'ny tany soa aman-tsara ao Moskoa taorian'ny tsy fahombiazan'ny motera
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Boeing 747 miaraka amina mpizahatany 500 any amin'ny tany soa aman-tsara ao Moskoa taorian'ny tsy fahombiazan'ny motera
Fiaramanidina Boeing 747 misy dobo roa misy motera iray tsy mandeha miasa no tafita soa aman-tsara tao amin'ny seranam-piaramanidina Moskoa Vnukovo.
Fiaramanidina Boeing 747 misy dozabe manana motera iray tsy mandeha miasa no tafita soa aman-tsara tao Moskoa Seranam-piaramanidina Vnukovo. Mpizahatany Rosiana 500 eo ho eo no nitondra azy, hoy ny Interfax.
Ilay fiaramanidina lehibe Rossiya Airlines Boeing dia nahavita nidina soa aman-tsara taorian'ny iray tamin'ireo maotera efatra voalaza fa tsy nahavita sidina antenantenany tokony ho tamin'ny 1 ora tolakandro tamin'ny talata teo. Niainga avy tao Larnaca, toerana fizahan-tany malaza any Sipra, ny fiaramanidina.
Ny famaritana ara-teknika ny fiaramanidina dia nahafahana nanidina nankany Mosko niaraka tamin'ny milina miasa telo, hoy ny loharanom-baovao iray tamin'ny Interfax.
"Mpizahatany Rosiana 500 eo ho eo avy amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena no niditra tamin'ny fiaramanidina Boeing," hoy ny tatitra nataon'ny Interfax mitanisa ny loharanom-baovao. Nanampy izy io fa nanapa-kevitra ny hamono ny iray amin'ireo motera ny ekipazy ary hitandrina ny raharaha.